musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Karl-Anthony Towns Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya yeiyo NBA Star inonzi "Maguta". Icho chizere chakafukidzwa cheKarl-Anthony Towns Yehucheche Nyaya, Hupenyu, Mhuri Chokwadi, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga, uye zvimwe zvinozivikanwa zviitiko kubva panguva yaakange ari HAPANA BODY kusvika paakava VANHU.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake akasarudzika bhasiketi hunyanzvi izvo zvakamuwanisa iye NBA rookie yegore mu2016. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga Karl-Anthony Towns's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Karl-Anthony Towns Nyaya Yevechidiki:
Karl-Anthony Towns akazvarwa musi wa15 Nyamavhuvhu 1995 kuna amai vake, Jacqueline Cruz muDominican nababa vake, Karl Towns Sr. an African-American kuEdison, New Jersey. Iye ndiye wechipiri wevana vatatu vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Jacqueline Cruz, uye baba vake, Karl Towns Sr.
Vabereki vaKarl-Anthony Towns, Jacqueline Cruz, naKarl Towns Sr.
Nyika yeAmerican neraDominican-American madzinza akaberekerwa mumhuri yepakati mhuri yemhuri. Mhuri yake mabviro ane mutsara weAfrica neDominican midzi. Mataundi akakurira muPiscataway, New Jersey kwaakakurira pamwe nehanzvadzi dzake dzinoti; Lachelle Mataundi neMalaika singleton-Towns.
Karl-Anthony Towns akapedza mazuva ake ehudiki kuPiscataway, New Jersey.
Kukura muPiscataway, Mataundi akafadzwa nemutambo webhasikiti apo akatarisa baba vake vachidzidzira timu yebhasiketi. Kuda kwake basketball kwainge kwakakura sezvo aigara achifungisisa nezve zvemashiripiti ari kumashure kuti vatambi vanogona sei kusvetuka vakakwira mumhepo vaine bhora. Mataundi aiziva kuti mhinduro dzemibvunzo yake dzaingowanikwa chete kana iye achipinda mumutambo nokudaro akatanga genesis yemitambo yake yebhasiketi.
Karl-Anthony Towns Dzidzo Uye Basa Rokuvaka:
Vabereki vaKarl-Anthony Towns vakamunyorera kunodzidza kuzvikoro zvakasiyana kubva paudiki hwake. Kutanga, akaenda kuLake Nelson Seventh-day Adventist Chikoro, mushure mezvo akanyoreswa kunodzidza kuWedu Mukadzi weFatima Chikoro. Akazoendesa kuTheodore Schor Middle School uko kwaakadzokorora giredhi rechinomwe kuitira kuti avandudze pakudzidza kwake. Paaive mugiredhi rake rechishanu, Towns aigara achibatana nebasketball kudzidziswa kweTechnical High Chikoro uko baba vake vairairidza basketball.
High Chikoro zvibodzwa:
Maguta akakurumidza kunyoresa kuSt.Joseph High Chikoro ndokujoinha Chikoro chebhasikiti timu - Iwo maFalcon. Akatungamira timu yebhasikiti kuenda kumakwikwi ehurumende kwaakawana chinzvimbo chepamusoro muESPN 25 yenyika chinzvimbo chevatambi veChikoro chepamusoro mu2012. Mufaro wemhuri yaKarl-Anthony Towns aisaziva kusungwa panguva yaakawana izvi.
Akabatana neFalcons kuSt.Joseph High Chikoro uye akazove mutambi wepamusoro we2012 ESPN 25 yenyika chinzvimbo.
Karl-Anthony Mataundi Ekutanga Kwehupenyu Hupenyu:
Kubudirira kwemataundi mumutambo we basketball muna 2012 kwaive kwakatanhamara. Akatungamira timu yake yeChikoro chepamusoro chebhasikiti kutaura mazita mugore ra2013 na2014. Kuita kweMadhorobha kwakave mucherechedzo wakazivisa kugona kwake mumutambo. Asati aita mutambo wekunakisa-mutambo muHigh School, Towns akasarudzwa kuti atambire nyika yaamai vake achimiririra timu yeDominican Republic basketball mumakwikwi e2011 ne2012 epasi rose bhasiketi pazera re16.
VERENGA Nikola Jokic Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Waizviziva here?… Akamiririra Dominican Republic pamakwikwi e2011 na2012 epasi rose basketball.
Mushure mekupedza chikoro chesekondari neCGPA ye3.96 pachiyero che4.5, Mataundi akanyoresa kudzidza Kinesiology kuKentucky koreji. Nenguva isipi akabva kuKentucky kweNBA uye akatumidzwa wechipiri-timu All-America neNABC uye akabatana nePrince pamwe nechitatu-timu All-American ne Sporting nhau.
Karl-Anthony Towns Road KuMukurumbira Nyaya:
Mataundi akasarudzwa neMinnesota Timberwolves nomusi wa25 Chikumi, 2015, aine wekutanga kutora mu 2015 NBA kunyorwa. Kuita kwake kwemitambo gumi nematatu yekutanga neMinnesota Timberwolves yaive pfungwa-ichirova yaisvika gumi nematanhatu mapoinzi uye gumi neshanu rebound pamutambo.
Commissioner weNBA Adam Silver anobata maoko Karl-Anthony Towns uyo akasarudzwa neMinnesota Timberwolves neyekutanga sarudzo mu 2015 NBA kudhizaina.
Nekudaro, kuita kwaMataundi mushure memitambo yake gumi nematatu yekutanga kwakadonhedza zvakanyanya kuenzana 8.4 mapoinzi uye 6.0 rebound pamutambo mumitambo mishanu inotevera. Kunyangwe kuita kwaMataundi kwaive kwakashata, akaisa simba rakawanda mukudzidziswa zvakaoma kuvandudza pahunyanzvi hwake kuitira kuti arege kuora moyo kune vaaitamba navo pamwe nevateveri vake.
Akaodzwa mwoyo nekusashanda zvakanaka kwake mumutambo wake wechi14 kusvika wechi19 paTimberwolves.
Karl-Anthony Mataundi Kukwira Kuzivikanwa Nhau:
Muna 2015-16, Mataundi akatamba uye akatanga mumitambo yose makumi matanhatu neshanu yeTimberwolves ine avhareji yekuita ye82 mapoinzi uye 18.3 rebound pamutambo wakamuwanisa iye NBA rookie yegore inokudzwa. Iye zvakare akawana Western Western Rookie yeMwedzi inokudzwa kwemwedzi mitanhatu uye akave wechishanu asina kubvumirana NBA Rookie yegore. Panguva iyo Towns yaive nemakore makumi maviri nemasere ekupedzisira, akave wechitatu-wechidiki mutambi kuve nemapoinzi makumi mana nemasere uye gumi neshanu pamitambo mumakumi matatu apfuura.
Iye anovimbisa basketballer akagamuchira iyo NBA rookie yegore anokudza muna 2016.
Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora, Karl-Anthony Towns inyanzvi yepamusoro yeNBA uye asaina kuwedzera $ 190 miriyoni yepamusoro-soro yekuwedzera pamwe chete neMinnesota Timberwolves timu munaGunyana 2018. Nekuita kwakasiyana kweiyo Timberwolves Center player, Mataundi ave yakasarudzwa kaviri kumutambo weAll-Star muna 2018 na2019 zvichiteerana. Pasina mubvunzo, iye ndiye mumwe weUS anonyanya kufarira NBA Stars padivi Kawhi Leonard, Luke Doncic, Giannis Antekokoumpo, Joel Embiid, James Harden etc. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Karl-Anthony Towns Hukama Hupenyu Chokwadi:
Kufambira paKarl-Anthony Towns hukama hwehukama, iye asina kuroora panguva yekunyora. Iyo nyowani mudiki ine tarenda yeNBA basketball yanga iri murudo rwehukama naKawahine Andrade kusvika pavakundwa-mumwedzi waMay 2018.
VERENGA Kawhi Leonard Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Facts
Karl-Anthony Towns nemusikana wake, Kawahine Andrade.
Chikonzero chekuputsa kwake: Karl-Anthony Towns musikana anonzi akanyeperwa kuti akabatana nemumwe wake waaidzidza naye, Jimmy Butler. Kunyatso tsvagurudzwa kwakaitwa kuti uone chokwadi cheizvo runyerekupe, uye humwe humbowo hwakawanikwa hwakaratidza kuti musikana weTowns akamubiridzira nekurara naJimmy muna Chivabvu 2018. Kunyangwe zvataurwa naMataundi pane nyaya yese zvaive zvisina kujeka, akamira kutumira musikana wake mufananidzo panenge panguva imwechete yechiitiko.
Karl-Anthony Towns Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Chimwe chezvinhu chinogona kubatsira mukuzadzikiswa kwechiono chemwana imhuri yake. Karl-Anthony Towns anobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Muchikamu chino, tinokuunzira chokwadi nezve hupenyu hwemhuri yake kutanga nevabereki vaKarl-Anthony Towns.
Nezve baba vaKarl-Anthony Towns: Karl Towns Sr. ndibaba veMataundi. Baba vemataundi vaivewo mutambi webhasikiti uye vakave munhu wekutanga akagadzira kuda kwe basketball muhupenyu hwemwanakomana wake. Karl Towns Sr. akatamba basketball kuMonmouth University uye akashandawo semurairidzi webasketball kuPiscataway Technical High School apo Towns aive achiri mugiredhi rake rechishanu.
Karl-Anthony Towns nababa vake, Karl Towns Sr.
Nezve amai vaKarl-Anthony Towns: Jacqueline Cruz ndiamai veMataundi. Cruz agara achitsigira mwana wake mune zvese zvehupenyu hwehupenyu hwake. Aigara achimukurudzira kuisa mukuedza kwake kwese mukuve anoshamisa basketball player. Mashoko ake nezviito zvekurudziro zvaive chikamu chekurudziro izvo zvakapa Towns pfungwa yekusazomborega sezvaakaona kuti saamai vake, kune vanhu vazhinji varikutarisa kubudirira kwake.
Karl-Anthony Towns naamai vake, Jacqueline Cruz.
Nezve hama dzaKarl-Anthony Towns 'uye hama: Karl-Anthony Towns ane hanzvadzi mbiri asi haana hama. Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezve hanzvadzi yake mukuru, Lachelle Towns uye munun'una wake, Malaika Singleton-Towns. Nezve madzitateguru ake, pakange pasina ruzivo nezve sekuru vake nasekuru naambuya pamwe nasekuru nasekuru vake. Uyezve, ruzivo rudiki rwunozivikanwa nezve babamunini vekwaMadhorobha nasekuru pamwe nababamunini vake.
Hanzvadzi dzaKarl-Anthony Towns, Lachelle Towns (L) uye Malaika Singleton-Towns (R).
Karl-Anthony Towns Upenyu hwechokwadi chokwadi:
Chii chinoita Karl-Anthony Towns? Kuti ndikupe iwe inogutsa ruzivo nezve iyo bio yeMataundi, tinokuunzira iwe hunhu hwehunhu hwake kunze kwenyika yeNBA. Karl-Anthony Towns 'Hupenyu Hwega musanganiswa weScorpio Zodiac maitiro.
Karl-Anthony Towns Kufarira uye Hobbies: Mataundi akafumura kuti zvido zvake hazvisi zvinongogumira kune basketball. Akataura mune imwe yemubvunzurudzo yake kuti ane zvakawanda zvekubika mune dzakasiyana minda kunze kwebhasikiti. Akati “Ndinofarira gorufu. Ndinoda kutamba baseball. Ndinoda kungova ini ”. Izvi zvinoita kuti hupenyu hwake kunze kweiyo basketball pitch inyanye kufadza.
VERENGA Stefani Curry Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Karl-Anthony Towns achitamba baseball munguva yake yekusarudzika.
Karl-Anthony Towns Hupenyu Hupenyu:
Karl-Anthony Towns ine mari inofungidzirwa inosvika zviuru gumi nemashanu zvemadhora panguva yekunyora. Nekuda kwechibvumirano chake chenguva pfupi chemamirioni mazana maviri emamiriyoni emadhora neTimberwolves, mambure ake akakosha angangodaro Skyrock kune yakakwira mari mune ramangwana rinouya. Iko kunobva hupfumi hwake kunonyanya kubva pabhasiketi yake yekuedza uye kugumisa kunobata nemhando dzakafanana neNike, Gatorade uye 15K mitambo kutaura zvishoma. Kuongororwa kwenzira yake yekushandisa mari kunoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Karl-Anthony Towns 'zvinhu: Pakutanga kwebasa rake rebhasikiti paMinnesota Timberwolves, Mataundi akange asina kana chekukwira uye kazhinji aifamba kusvika pakadzika musango kupisa kwemamiriro ekunze. Timberwolves Center yakazotenga imba yakasarudzika yaikosha madhora zviuru zvina nemazana mashanu emamiriyoni kuWest Metro muna 4.52. Imba yacho inofukidza nzvimbo inosvika 2018 square-tsoka uye ine dzimba mbiri dzekudyara, pfumbamwe dzimba dzekugezera, dzimba dzemukati uye dzekunze, gorofu gomba, koti tenesi kune imba yetii, shubhu inopisa uye zvimwe zvinowanikwapo. Iye zvakare ane dzimwe mota dzakanaka uye dzinodhura kwazvo izvo; Volvo S17,251 uye Range Rover.
Karl-Anthony Towns 'Lifestyle- Iye ane imba yepamusoro muWest Metro.
Karl-Anthony Towns Chokwadi:
Kuputira yedu Karl-Anthony Towns yehucheche nyaya uye biography, heano zvimwe zvishoma-anozivikanwa chokwadi nezvake zvichakubatsira iwe kunzwisisa zvakakwana mufananidzo weBio yake.
Vabereki vaKarl-Anthony Towns vakamurera kuti ave muKristu anozvipira. Munguva yake yekudzidzira mazuva nababa vake, Towns aive neyakaomarara basketball tsika yekuwana 1000 kusvetuka kupfura mazuva matanhatu pavhiki kusasanganisa Svondo chete yebasa reChechi.
Mataundi haana kunyorera chero chimiro chetatiki pane muviri wake panguva yekunyora iyi bio. Haana kufarira inking tattoos pamuviri wake. Paakaudzwa mubvunzurudzo kuti ane tarisiro yekukunda zita reNBA iro rinodaidzira kuti achagadziriswa maLouisville Cardinal mumusoro wake, Mataundi akapindura kuti;
“Ndingaita chero chinhu chandinofanira kuita kuti ndiwane zita, asi ndinoziva mushure mekunge zita racho rave muruoko rwangu ndinenge ndichatora nyora yacho”.
Karl-Anthony Mataundi haaputi uye haasati aonekwa achinwa doro rakawandisa futi. Ari kunetsekana zvakanyanya nezvekudya kwake sezvo chiri chimwe chezvinhu zvakakosha zvinoita kuti aite mukubata kwake mudengu yebhasikiti.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Karl-Anthony Towns Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Stefani Curry Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Michael Jordan Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
Anthony Davis Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts